အမှန်တကယ်ဟု ထင်ရသောပုံများ | အိမ့်မှူးသော်
အခုတင်ပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေက photoshop နဲ့ဖန်ုတီးထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်သောအရာတွေကို တကယ်ဖြစ်သယောင် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Fackbook art ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
mstint 6:17 AM
ပုံတွေကြည့်သွားတယ် အိမ့်မှူးသော်ရေ။ တီတင့်သားကြီးလည်း ပုံတွေကို အမျိုးမျိုးမျက်လှည့်ပြလေ့ရှိတာမို့ မကြာခနတွေ့ဘူးနေတယ်း)
လရိပ်အိမ် 12:10 PM
Nancy Ei 7:07 PM
အရမ်းမိုက်တယ် http://www.shwehub.com/ မှာ မျှဝေပေးမယ်...
my web site - http://cendari.fefonlus.it/wiki/core/index.php/Toyota_Windstar_Problems_Recalls
My blog hasalot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it looks likealot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd certainly